Ku noqo dhab ahaanshaha -
Mid baa umadda ku xukumi kara weynaanta ummad ahaan habka ugu liita ee laguula dhaqmo halkaa! Ereyga "dadku" waa mid aad u ballaaran. Qeexitaanka "dadka" oo uu bixiyay Larousse du ... Akhri wax dheeraad ah
Waxaan aragnaa, markii ugu horreysay, safka hore, cirrooleyaasha, Zopac ee badda Sanaga, Sebtember 13, 1958, Kolonel Lamberton caan ah, oo ah qaaciddada caanka ah ee ... Akhri wax dheeraad ah
Gaar ahaan aragti ahaan, Madaxweynayaashu waa “Kwame Nkrumah iyo Sekou Touré” waxay doonayaan midnimada Afrika. Markay taariikhdu ahayd November 23, 1958, waxay abuureen Midowgii Gaana-Guinea. A ... Akhri wax dheeraad ah
Ballaadhinkeeda dhuleed ayaa ku fidsan illaa Hooyada Cas ee ku wajahan Yemen ee Carabta. Abyssinia waxay aragtay isku xigxig boqortooyo Christian Orthodox oo qarniyaal iska caabin ... Akhri wax dheeraad ah
Ninka Madow / Afrikaanka ah ayaa la khiyaaneeyey tan iyo dhalashadiisa: waxaan isaga uga been sheegay asalkiisa, waxaan u sheegnaa awowgiis, taariikhdiisa, awoodiisa, weynaantiisa iyo guulaha uu gaadhay, waxaan ka dhigaynaa inuu rumeysan yahay inuusan waxba ahayn isaga oo aan dulmigu lahayn… (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: May 19, 2020 00: 00 No Comments
Taasi waa inuusan aaminin qofna gaar ahaan walaalkiis, laakiin taa badalkeeda colonizer. Isaga ayay been ugu sheegaan dugsiga, oo waxay isaga ugu seexdaan kaniisadda, masaajidka ay ku ... Akhri wax dheeraad ah